काठमाडौँ, १२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय जासुसी संयन्त्र रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई पाहुना बनाउँदा घरझगडा चुलिएको छ । यही घटनाले पार्टीभित्र पुनः प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेसम्मको गृहकार्य पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले गरिरहेको खबर बाहिरिएको छ ।
नेपाली नेताहरुको घरझगडा र दन्तबझानलाई पुनः उत्कर्षमा पुर्‍याउने गरी भएको सामन्तको नेपाल भ्रमणका पृष्ठभूमिका बारेमा छलफल गर्न भने नेपाली नेताहरु चुकिरहेका छन् । वैश्विक सम्बन्ध र समीकरणहरुमा व्यापक बदलावसहितको नयाँ नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेको बेला नेकपाभित्रको बहस नितान्त ‘मर्यादाक्रम’ र ओलीको स्कुलिङ अनुसारको ‘राष्ट्रवाद’को बहसमा साँघुरिएको छ । भारत-चीनले गरेको बेका सम्झौतालाई टाढा राखेर भइरहेको घरझगडा बेकारजस्तो त्यतिबेला लाग्छ जतिबेला बदलिँदै गरिरहेका वैश्विक राजनीतिक समीकरणबारे चर्चा गर्न थालिन्छ ।
भागवतको ‘भनाई’ र सामन्तको ‘सेवा’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खातिरदारी र पाहुनाको रुपमा नेपालको ‘सेवा-सत्कार’ ग्रहण गरेर सामन्त नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) का प्रमुख मोहन भागवतले चीनलाई चुनौती दिन नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने भाषण गरे ।
भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने आरएसएसका प्रमुखले यसै साता आरएसएसले प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको उपलक्ष्यमा आयोजना गर्ने वार्षिक कार्यक्रमलाई भारतको नागपुरमा सम्बोधन गर्दै चीनविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए । उनको तर्क थियो, ‘हामीले हाम्रो रणनीतिक तयारी, आर्थिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर चीनभन्दा शक्तिशाली हुन आवश्यक छ र हामीले छिमेकीसँग अझ पहुँच बनाउन आवश्यक छ ।’
भागवतले छिमेकी मुलुकहरु म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, लगायतका मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आरएसएसको नीतिबारे स्पष्ट पारे । ‘उनीहरु हजारौ बर्षदेखि धेरै कुरामा हामी जस्तै छन् । हामी उनीहरुसँग तत्कालै जोडिनुपर्छ । छिमेकीसँग केही विवाद र फरकपन जहिले पनि हुन्छ तर त्यसलाई हामीले छिटै स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनको भनाई थियो ।
नेपालसँग भारतको सम्बन्ध उतारचढावमा रहेकै बेला रअ प्रमुख गोयलको नेपाल भ्रमणसँग मोहन भागवतको भनाईलाई जोडेर बुझ्नुपर्ने कतिपय विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
वैदेशिक नीतिमा भारतको ‘सिफ्ट’
शितयुद्धताकादेखि रुस-भारत र अमेरिका-पाकिस्तानको सम्बन्धमा बदलाव आएको छ । नेपाली नेताले चीनको रेलको नारा भट्याइरहँदा चीनले पाकिस्तानमा झण्डै पाँच अर्ब लगानी गरेर पहिलो मेट्रो रेल बनाई सकेको छ । दैनिक २ लाख ५० हजार मान्छेलाई सेवा दिने उक्त रेल सेवामा लगानी गरेर चीनले केही सन्देश दिन खोजेको छ । नेपाली नेताहरु भने मौसमअनुसार कहिले भारतीय कार्ड त कहिले चिनियाँ कार्ड खेलेर मतदातालाई इमोस्नल ब्ल्याकमेल गरिरहने र सत्तामा टिकिरहने खेल खेलिरहेका छन् ।
शक्ति केन्द्रहरुको भ्रमणरुपी दौडधुप र लगानी पछाडि केही स्वार्थहरु हुन्छन् । केही पृष्ठभूमिहरु हुन्छन् । चाहे सामन्तको नेपाल भ्रमण होस् वा अमेरिकी मन्त्रीहरुको भारत भ्रमण वा पाकिस्तानमा चीनको लगानी । नेपाल-भारत सम्बन्ध र पछिल्ला भेटघाटहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ । केही समययता दक्षिण एशियासहित इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको राजनीतिमा बिल्कुलै नयाँ-नयाँ समीकरण र ध्रुवीकरणहरु सतहमा आइरहेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओ र रक्षा मन्त्री मार्क एस्परको पछिल्लो भारत भ्रमण तथा त्यसक्रममा भएको सैनिक सम्झौता यसको नयाँ कडी हो ।
बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका सम्झौता) कुनै लुकेको वा लुकाइएको सम्झौता रहेन । यसलाई कतिपयले चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतको गठबन्धन औपचारिकरुपमा प्रारम्भ भएको अर्थमा लिएका छन् । यो टु प्लस टु बैठकलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतितर्फको यात्रामा ठोस प्रगति मान्न सकिने तर्कहरु सुनिन थालेको छ ।
दक्षिण एशियाको नेटोका रुपमा अभ्यास गरिएको क्वाड संयन्त्रका सदस्य मुलुकहरुको आगामी महिना भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यास अगाडि यो सम्झौता भएको छ र अमेरिका-भारत संयुक्त सैन्य सम्झौतालाई एस्परले चीन विरुद्धको कदम भएको सार्वजनिकरुपमै बोलेका छन् ।
बेका सम्झौतासँगै भारतले आफ्नो मूल विदेश नीतिमा बद्लाव ल्याएको छ । उसले असंलग्न नीतिलाई त्याग्दै चीनविरुद्ध अमेरिकी मोहरा बनिरहेको सन्दर्भमा विश्व राजनीतिको अन्तरविरोध दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा संकेन्द्रण हुनसक्ने सम्भावना घनिभूत बनिरहेको छ ।
बढ्दो चीन-अमेरिका द्वन्द्वमा भारतको स्पष्ट पक्षधरताको प्रभाव संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले पनि व्यहोर्नुपर्छ । नीतिमा आउने बद्लावले संरचनागत परिवर्तनको माग गर्दछ । यतिबेला चीन, भारत र अमेरिकाको घरेलु तथा बाह्य कुटनीतिक रणनीतिहरुमा आउनसक्ने बद्लावलाई बुझ्ने नेपाली नेताहरुले कुशल कुटनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
कतिपयले यसलाई आसन्न अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा भारतीय तथा एशियन मूलका मतदातालाई प्रभावित गर्न गरिएको सम्झौता भनेर हल्का टिप्पणी गरे पनि यसको रणनीतिक महत्व र प्रभाव रहनेछ । व्यक्तिहरु आउन सक्छन्, जान सक्छन् तर, दुई देशबीच भएको सम्झौताको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिः अवसर कि चुनौती ?
बेका सम्झौतापछि एस्परले भने, ‘चीनको कम्युनिष्ट पार्टी लोकतन्त्र, विधिको शासन र पारदर्शिताको पक्षमा हुन सक्दैन भन्ने अमेरिका र भारत दुवै देशका नागरिकले बुझिसक्यौं । तर खुशीको कुरा के छ भने भारत र अमेरिकाको सहकार्य चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सृजना गर्ने जोखिमको विरुद्धमा मात्र हैन, समकालीन विश्वका सबै प्रकारका जोखिम विरुद्ध सहकार्यका लागि केन्द्रित हुनेछ ।’
बेका सम्झौताले दुवै देशसँग उपलब्ध महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक सूचनाहरुलाई साझा उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । विशाल भारत र चीनबीच नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँ केन्द्रित हुनसक्ने वैश्विक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दा नेपाल पनि एउटा प्रभावक्षेत्र बन्ने सम्भावना प्रवल छ । एकातिर अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियालगायतका देशहरुको गठबन्धन, अर्कोतिर चीन, रुस, उत्तर कोरिया, इरान र पाकिस्तानको समीकरण, एशियामा ठूला-ठूला राजनीतिक भूकम्पहरु आइरहने छन् । इपिसेन्टर जता भए पनि नेपालले त्यसको धक्का महसुस गरिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालले वैश्विक राजनीतिको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल राम्रोसँग खेल्न सके अवश्य पनि यो अवसरमा बदलिन सक्छ । तर सत्ताको चास्नीमै रमाएर अल्पकालीन नाफाघाटाको केटाकेटी कुटनीतिक अभ्यास भयो भने नयाँ वैश्विक समीकरण नेपालको लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ । केही समयअघिसम्म मुखै खोल्ने नमान्ने छिमेक अहिले सामन्त गोयलहरुलाई विशेष विमानमा नेपाल पठाउन तयार छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण हुँदा चीनले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ । आरएसएसका नेताहरु छिमेकीसँग सानातिना कुरा बिर्सिएर सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने भाषण गर्न थालेका छन् ।
यी सबै गतिविधिहरुलाई नेपालले अवसरमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । तर नेपाली नेताहरुको र सरकारको छाँटकाँट हेर्दा त्यस्तो देखिन्न ।
नेपाली नेताका दुःख
वैश्विक राजनीति नयाँ ढंगले विभाजित र ध्रुवीकरण भइरहँदा यता नेपालमा भने गोयल-प्रधानमन्त्रीबीचको भेटलाई लिएर सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु विभाजित भएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अब बस्ने पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषयलाई फेरि ब्युँताउने तयारी गरेका छन् ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग मध्यरातिसम्म बालुवाटारमा भेट गरेको र यस बारेमा पार्टीमा कुनै पनि समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
नेकपामा ओली पक्षीय नेताहरु गोयल-प्रधानमन्त्री भेटको बचाऊ गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा रअ प्रमुख गोयल नेपाल आएको बताइरहेका छन् । उता प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक मर्यादा विपरित गोलसँग भेट गरेको नेकपाको असन्तुष्ट पक्षको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र रअ प्रमुखको भेटवार्तालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहक रूपमा भेट गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय जासूसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख गोयल र ओलीको भेटवार्तालाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको संज्ञा दिएका छन् । रअका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आएको र बालुवाटारमा प्रम ओलीसँग गोप्य संवाद गरेको प्रसंगलाई ओलीले कुर्सी जोगाउने हतियार र पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले कुर्सीमा उक्लने अवसरको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने जस्तो लक्षणहरु पछिल्ला खबरहरुबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको पार्टीले नयाँ सन्दर्भमा विदेश नीति बनाउन मेहनत गर्नुपर्नेमा आन्तरिक किचलोमा वर्षौंसम्म फसिरहेको देखिन्छ । यो अन्यौल र असंयोजनीय भद्रगोलता नेपालको लागि घातक हुनसक्छ ।